Isitolo esithengisa Impahla Yokuhlotshiswa Kwekhaya Yemvelo Yesoya Enephunga elimnandi I-Cube Incibilikisa i-tarts ifektri nabakhiqizi |Winby
Umhlobiso Wasekhaya Wemvelo Iphunga le-soy Cube Lincibilikisa ama-tarts
●Yenziwe nge-wax ye-soy yemvelo, lawa mathalethi e-wax athululwe ngesandla ahlinzeka ngokusha okuhlanzekile futhi kulula ukuwasebenzisa.Ukuncibilika kwe-wax kuyindlela ephephile kunamakhandlela endabuko, ukuze ukwazi ukujabulela iphunga lawo.
●Lawa makhyubhu e-wax ancibilikayo azogcwalisa igumbi lakho ngephunga elimnandi.Ilungele amakamelo okulala, amagumbi okuhlala, amagumbi okugeza, amahhovisi, nanoma iyiphi enye indawo lapho ufuna ukuvuselela umoya.
● siyakwamukela ukwenza ngendlela oyifisayo, ungasithumela idizayini yakho siqu noma amalebula akho ayimfihlo, i-wen ingakwenza isampula kuqala futhi yanelise izimfuno zakho.
Ikhiyubhu le-wax enephunga lemvelo lincibilikisa amabhlogo
Isici esiyinhloko se-ama-cubes we-wax:
I-melt wax block ayinayo intambo futhi ingasetshenziswa ne-heater.
Lokhu kuncibilika kwe-wax kuphephile futhi kuyavumelana nemvelo, lawa makhyubhu we-wax ancibilika athululelwa ngesandla nge-soy wax ukuze ashise.
Ukuncibilika kwe-soy wax kwenziwa ngokusebenzisa yonke i-wax ye-soy yemvelo kanye namafutha ephunga elimnandi kakhulu.Ama-Melts afanelekile kuma-dorms, amahhovisi noma amafulethi.
Ukuncibilika kwe-break away noma i-clamshell wax kuyathandwa ngoba akubizi futhi kulula.
Ukuncibilika kuvame ukwenziwa endaweni eyi-6, isikhunta se-plastic clamshell.
I-cube ngayinye icishe ibe ngu-1/2 oz.futhi izonikeza okungenani amahora angu-8.
Ungakhetha iphunga noma iphunga ohlwini lwethu lwephunga elimnandi, njenge-lavender, i-vanilla, i-rose, i-strawberry, i-lemon, ulwandle, njll.
Imininingwane ye-I-wax iyancibilika:
Okubalulekile I-wax ye-soy yemvelo
Ilogo/ilebula Ngokwezifiso njengezimfuneko zamakhasimende
Isikhathi esivuthayo Amahora angu-14
Okwedlule: I-chakra ehlobisa amakhandlela esoya anamakristalu esitokweni
Olandelayo: Iwikhi yekhandlela likakotini ene-Paraffin Wax Coated
Ibhodlela lengilazi elincane le-D03T elinesembozo sensimbi...